ဟင်းပွဲများအတွက် TPPRD103 / TPPRD104 CNC Hydraulic လာကြတယ်, Drlling & မှတ်သားနေပါသည်စက်
အလုပ်အပိုင်းအစ၏ Max.size: 1500 * 800mm
Max.punching အချင်း: 26mm
Max.drilling အချင်း: 50mm
Max.drilling အထူ: 40 မီလီမီတာ
marking အင်အားသုံး: 1000kn
တူးဖော်ဗိုင်းလိပ်တံနို့တိုက်ကျွေးရေးမြန်နှုန်း: ~ 280mm 25 / မိနစ်
ရေနံတွင်းတူး၏လည်ပတ်မြန်နှုန်း: ~ 560r 120 / မိနစ်
ယေဘုယျအားရှုထောင်: * 3200 3300 * 2600mm
ရှုပ်နေခဲ့သည်သံမဏိမျှော်စင်စက်မှုလုပ်ငန်း၏လယ်ပြင်တွင်သံမဏိပြား၏ marking အထူး CNC စက်။ ဒါဟာအစလာကြတယ်နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများသံမဏိပြား၏အမှတ်အသားကိုအသုံးပြုသည်။
ဟင်းပွဲများအတွက် TPPRD103 / TPPRD104 CNC Hydraulic လာကြတယ်, Drlling & မှတ်သားနေပါသည်စက်၏ကုန်ပစ္စည်းရေးစပ်သီကုံးမှု
လာကြတယ်, မှတ်သားနေပါသည်ယူနစ်အပါအဝင် 1. စက် Host က Hydraulic Clamp နှင့်အတူ 2. သူ Work-ဇယား
3. Hydraulic ယူနစ် 4. လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးအဖွဲ့
ဟင်းပွဲများအတွက် TPPRD103 / TPPRD104 CNC Hydraulic လာကြတယ်, Drlling & မှတ်သားနေပါသည်စက်၏အဓိကဖျေါပွခကျြ
1. ပင်မလုပ်ဆောင်ချက်များကို: လာကြတယ်, မှတ်သားနေပါသည်။
2. အဓိကအားဖြင့်မျှော်စင်၏ဆက်သွယ်မှုကိုပန်းကန်, တံတား, သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံမှာစက်မှုလုပ်ငန်း marking, လာကြတယ်များအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ဟင်းပွဲများအတွက် TPPRD103 / TPPRD104 CNC Hydraulic လာကြတယ်, Drlling & မှတ်သားနေပါသည်စက်၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ပုံစံ TPPRD103 TPPRD104
W ×အလုပ်အပိုင်းအစ L ကို၏မက်စ်အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) 800 × 1500 1000 × 1500
မက်စ်။ လာကြတယ်အချင်း (မီလီမီတာ) Φ26
ပန်းကန်လာကြတယ်ထူ (မီလီမီတာ)5~ 25 (Q345, 16Mn)
မက်စ်။ ရေနံတွင်းတူးအချင်း (မီလီမီတာ) Φ50
Max.?drilling ထူ (မီလီမီတာ) 40
လာကြတယ်အင်အားစု (KN) 1000
အင်အားသုံး marking? (KN) 800
min ။ အပေါက်များနှင့်ပန်းကန်အစွန်းအကြားအကွာအဝေး (မီလီမီတာ) လာကြတယ် 25
? Drilling အပေါက်အချင်းအပေါ်မူတည်
ဇာတ်ကောင်အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) 14 × 10 × 19
တူးဖော်ခြင်းများနို့တိုက်ကျွေးရေးအမြန်နှုန်း (မီလီမီတာ / မိနစ်) 25 ~ 280
တူးဖော်ဗိုင်းလိပ်တံ၏လေဖြတ် (မီလီမီတာ) 180
တူးဖော်ဗိုင်းလိပ်တံ (r / မိနစ်) ၏အလှည့်မြန်နှုန်း 120 ~ 560
စေ့စပ်သေချာခြင်း GB2694 နှငျ့အညီ
programming mode ကို Auto CAD software ကိုဆွဲသို့မဟုတ် lofting
ယေဘုယျအားရှုထောင်? L ကို× W × H ကို (မီလီမီတာ) 3200 × 3300 2600 × 3200 × 3700 2600 ×
စက်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) အကြောင်း 7000 အကြောင်း 7400
ဟင်းပွဲများအတွက် TPPRD103 / TPPRD104 CNC Hydraulic လာကြတယ်, Drlling & မှတ်သားနေပါသည်စက်၏ကုန်ပစ္စည်းအင်္ဂါရပ်များ
1. အဆိုပါစက်-frame ကိုကောင်းသောကျောမှုနှင့်ကြီးမားသောကိုင်တွယ်အာကာသနှင့်အတူ, ကို C-type အမျိုးအစားပန်းကန်ဂဟေဆော်ခြင်းဖြင့်ဖန်ဆင်းသည်။ စက်သုံးဦးသေဆုံး-ဘူတာ (သူတို့တွင်, တ marking သေ-ဘူတာရုံဖြစ်ပါတယ်), အော်တို switching သေ-ဘူတာသတ်မှတ်။ စနစ်က Clamping Rolls-ဘောလုံးကိုအလုပ်လုပ်စားပွဲကထောက်ခံသုည datum အမှတ်အသားအဖြစ်ပျက်စေခြင်း, workpiece အတူကွဲပြားခြားနားသော workpiece လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုင်ပါတယ်။ ဝင်ရိုး X ကို & Y ကိုအရေးယူ servo motor ကိုနှင့်ဘောလုံးကို-ဝက်အူမောင်းနှင်မှုဖြင့်ထိန်းချုပ်ရပါမည်, အလိုအလျှောက်တပြင်လုံးကိုစက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်သကဲ့သို့ကို double-ဝင်ရိုး CNC စနစ်, လာကြတယ်၏အနေအထားကိုထိန်းချုပ်ထား; အော်ပရေတာအနာဂတျမှာထပ်ခါတလဲလဲတောင်းဆိုအစီအစဉ်အတွက်ကွန်ပျူတာကို input ကို workpiece ရဲ့အရွယ်အစား may ။
2. မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, တည်ငြိမ် workpiece တိကျစွာအတူ CNC နည်းပညာ, servo motor ကို infeeding ်ပေးရန်။
3. အရေးကြီးအလုပ်လုပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းများကပြန်လည်ပြုပြင်ရန်လွယ်ကူ, modular စည်းဝေးပွဲကိုချမှတ်။
4. တပန်းကန်ပေါ်ရှုပ်နေခဲ့သည် marking ထွက်ယူသွား။
5. လွယ်ကူသောပရိုဂရမ်လည်းကွန်ပျူတာကို input ကိုတွင်း၏အချင်း, အနေအထားနှင့် workpiece ရဲ့အရေအတွက်နှင့် software များ lofting ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ program ကိုသုံးနိုင်ပါသည်လိမ့်မည်။ ထိုသို့သော NC1 ပုံစံအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှအဆင်သင့် TEKLA ခနျး software ကိုဖိုင်များ, ။
Self-ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုမအောင်မြင်မှုများ function ကိုအတူ 6. ။
7. X, Y ဝင်ရိုး servo motor ကို + ဘောလုံးကိုဝက်အူ + linear လမ်းညွှန်ခြင်းဖြင့်မောင်းနှင်နေကြသည်, ထိုတိကျစွာ သာ. ကောင်း၏။
8. Worktable ပိုပြီးလှပလက်တွေ့ကျတဲ့သံမဏိပန်းကန်, ချမှတ်။
ဟင်းပွဲများအတွက် TPPRD103 / TPPRD104 CNC Hydraulic လာကြတယ်, Drlling & မှတ်သားနေပါသည်စက်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ
ဟင်းပွဲများအတွက် Workpieces ofTPPRD103 / TPPRD104 CNC Hydraulic လာကြတယ်, Drlling & မှတ်သားနေပါသည်စက်
စက်ဖြတ်တောက်ခြင်း CNC သတ္တုပြား
TDZ စီးရီး Hydraulic Angle စက်မှတ်သားနေပါသည်
TPPD103 / TPPD104 CNC Hydraulic ပြားလာကြတယ်, D ကို ...
TBL1412, TBL1412A, TAPM1412 CNC လာကြတယ်, Marki ...
TAPM1516 (Enhanced) CNC Angle လာကြတယ်, မှတ်သားနေပါသည် ...
TGQ200 / TGQ250 Angle ကွိစက်
TPPRD103 / TPPRD104 CNC Hydraulic လာကြတယ်, Drlli ...